Iindaba - Umahluko phakathi kweLithium Drill 12V kunye ne-16.8V
Umahluko phakathi kweLithium Drill 12V kunye ne-16.8V
Amandla ombane ahlala esetyenziswa kubomi bethu bemihla ngemihla. Xa sifuna ukubhola imingxunya okanye ukufaka izikrufu ekhaya, kufuneka sisebenzise izixhobo zokomba amandla. Kukho umahluko phakathi kombane. Eziqhelekileyo ziyi-12 volts kunye ne-16.8 volts. Ke yintoni umahluko phakathi kwezi zimbini?
Yintoni umahluko phakathi kwe-12V kunye ne-16.8V yamandla ombane?
Umahluko omkhulu phakathi kwezi zixhobo zozibini zombane sisombane, kuba ivolthi enye zii-volts ezili-12, enye zii-volt eziyi-16.8, ezinokuthi zahluke ngokuthe ngqo, kwaye kuya kubakho umboniso ocacileyo kwiphakheji.
2. Isantya sahlukile. Xa usebenza phantsi kweendlela ezahlukeneyo, kuya kubangela isantya esahlukileyo. Xa kuthelekiswa, i-volt yombane eyi-16.8 iya kuba nesantya esikhulu.
3.Umthamo webhetri wahlukile. Ngenxa yeevolthi ezahlukeneyo, ke kuya kufuneka ukhethe iinjini ezahlukeneyo kwaye uqwalasele amandla e-elektroniki ahlukeneyo. Ukuphakama kombane, ukuphakama kwamandla e-elektroniki.
Ukuhlelwa koQeqesho loMbane
1.kwahlulwa ngokwenjongo, kukho izikrufu okanye izikrufu esibonelelwa nguwe, kwaye ukhetho lokomba kombane kukwahlukile, ezinye zilungele ukubhola izinto zentsimbi, kwaye ezinye zilungele izinto zomthi.
2.Kwahlulwe ngokombane webhetri, esetyenziswa ngokuxhaphakileyo zii-volts ezili-12, kukho i-volts eziyi-16.8, kunye nee-volts ezingama-21.
3.Divided ngokokuhlelwa kwebhetri, enye ibhetri ye-lithium, kwaye enye ibhetri ye-nickel-chromium. Eyokuqala ithandwa kakhulu kuba iyaphatheka kwaye ilahleko encinci, kodwa khetha ibhetri ye-nickel-chromium ixabiso lombane lesandla sombane liya kubiza kakhulu.
Ixesha Post: Sep-15-2020